प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि भारतीय मिडियाले के लेखे ?
काठमाडौं—प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि भारतीय मिडियामा ठूलो चर्चा भएको छ । धेरै मिडियाहरुले उनको राजीनामालाई प्राथमिकतामा राख्दैं समाचार बनाएका छन् ।
विप्लव माओवादीको बन्दको प्रभाव सामान्य,केही सवारीमा आगजनी
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आह्वान गरेको बन्दका कारण राजधानी लगायत देशैभरको जनजीवनमा सामान्य प्रभाव देखिएको छ । अन्य सवारीसाधन भने निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
ठाडो शीर पारेर विदा भए प्रधानमन्त्री पदबाट केपी, जाँदा जाँदै के भने उनले ? पूर्ण पाठ सहित
काठमाडाैं । जङ्गलमा बञ्चरोले ढालिँदै गरेको रूखका आँसु हेरेर छिमेकी रूखले सम्झाएछ– हेर, बञ्चरोबाट काटिनु र दाउरा, घरको दलिन-खाँबो या फर्निचर बन्नु त हाम्रो नियति नै हो, किन रून्छौँ ? काटिँदै गरेको रूखले भनेछ– मित्र, बञ्चरोले काटेको भनेर म रोएको होइन । देख्यौँ ? मेरै जातको हाँगोेले बञ्चराको बिँडको काम गरिरहेको छ ! म आज आफ्नै जातबाट घाइते हुनुको पीडाले रोइरहेको छु ।’
पिकअप भ्यान भिरबाट खस्दा दुईको मृत्यु
मोरङ । मोरङको पहाडी गाविस रमितेखोलामा गएराति पिकअप भ्यान भिरबाट खसेर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
औषधी बोकेको ट्रकमा आगजनी, विप्लव माओवादीले जलाएको आशंका
चितवन,साउन । चितवनको रत्ननगरमा आज बिहानै औषधि बोकेको ट्रकमा आगजनी गरिएको छ । बिहान करिब १ बजेर ३० मिनेटको समयमा रत्ननगरको निपनी चोकमा अज्ञात समूहले ट्रक जलाएको हो
आइएसको आक्रमणमा परी बग्दादमा ज्यान गुमाउनेको सख्या २१ पुग्यो
बग्दाद । इराकको राजधानी बग्दादको उत्तरी भागमा रहेको एक सुरक्षा चौकीलाई लक्षितगरी आइतबार बिहान गराइएकोे एक आत्मघाती आक्रमणमा मृत्यु हुँने व्यक्तिको संख्या २१ पुगेको छ ।
बाबुराम बोले 'नयाँ सरकार गठनमा समस्या छैन'
कास्की । नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक जटिलता रहेको विवाद चलिरहँदा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले संविधानमा त्यस्तो कुनै जटिलता नरहेको बताएका छन् ।
हाइहाइका साथ विदा भए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं । अहिलेसम्मका हरेक प्रधानमन्त्री जाने बेला शिर निहुर्‍याएरै सत्ताबाट बाहिरिएको इतिहासले बताइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ती सबै इतिहासभन्दा फरक रुपमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीले आज एघार बजे अनशन तोड्दै
काठमाडौं । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल अस्पताललाइ सरकारले लिएर राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत चलाउने लगायतका चार बुँदामा सहमति भएपछि डा केसीले अाजदेखि अनशन ताड्ने भएका छन्।
मन्त्रालय भागबण्डा, कांग्रेसलाई गृह माओवादीलाइ अर्थ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिइ मार्गप्रशस्त गरेलगत्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरुलाई समेटेर सरकार बनाउने कसरत थालेका छन् ।
Page 3134 of 3760